Saya Zin ( Active English )
Ko Zin Zae (Active English)
Zin Zae ( Active English )
ဖုန္းေျပာရာမွာ သုံးရမယ့္ အဂၤလိပ္ စကားေျပာ အသုံးအႏႈန္းေတြ ... သတိထားစရာေလးေတြ နဲ႔ နမူနာ စကားေျပာခန္း ဒီ Video သင္ခန္းစာမွာေတာ့ ဆရာတို႔ ဖုန္းေျပာတဲ့ အခါမွာ သတိထားရမယ့္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ ကိစၥေတြနဲ႔ အသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ စာေၾကာင္း ပုံစံ ၄၀ ကို ေလ့လာ ေလ့က်င့္ ၾကမွာပါ 😇 ဒီ အဂၤလိပ္ စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ကို ဆရာတို႔ ရဲ႕ ALC ( Active Learners' Club ) အြန္လိုင္း သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ ကေန ထုတ္ႏႈတ္ေပးထားတာပါ ။ ဒီ အေၾကာင္းအရာက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသုံးခ်လိုသူေတြအတြက္ အေတာ္ အေရးႀကီးတယ္ ေျပာရမွာပါ ။ ( Elementary To Pre-Intermediate Level အတြက္ ဦးစားေပး သင္ခန္းစာပါ ။ စာ သိပ္မေက်ေသးတဲ့ / ထပ္ ေလ့က်င့္ခ်င္တဲ့ Intermediate သင္တန္းသားေတြလည္း ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္ ... 😇 ) ၁ နာရီစာ Video သင္ခန္းစာ ျဖစ္ၿပီး ၾကည့္႐ုံနဲ႔ အပိုင္ရသြားမွာ မဟုတ္ေတာ့ လိုအပ္ရင္ ၂ ေခါက္ ၃ ေခါက္ လိုက္က်င့္ လိုက္ေျပာ ၊ ျပန္ၾကည့္ဖို႔ အခ်ိန္ မႏွေျမာပါနဲ႔လို႔ သတိေပးလိုက္ပါရေစ 😇 ေလ့လာ ေလ့က်င့္ ထိေတြ႕ရင္း အဆင္ေျပ တိုးတက္ၾကပါေစ ... အားလုံးပဲ ... အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား အရံအတားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး အသိပညာနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ ... 😇 ေစတနာျဖင့္ #ကိုဇင္ေဇ https://sayazin.net/wvtele-vbc
ဖုန်းပြောရာမှာ သုံးရမယ့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော အသုံးအနှုန်းတွေ ... သတိထားစရာလေးတွေ နဲ့ နမူနာ စကားပြောခန်း ဒီ Video သင်ခန်းစာမှာတော့ ဆရာတို့ ဖုန်းပြောတဲ့ အခါမှာ သတိထားရမယ့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ကိစ္စတွေနဲ့ အသုံးချနိုင်တဲ့ စာကြောင်း ပုံစံ ၄၀ ကို လေ့လာ လေ့ကျင့် ကြမှာပါ 😇 ဒီ အင်္ဂလိပ် စကားပြော သင်ခန်းစာ ကို ဆရာတို့ ရဲ့ ALC ( Active Learners' Club ) အွန်လိုင်း သင်ကြားရေး အစီအစဉ် ကနေ ထုတ်နှုတ်ပေးထားတာပါ ။ ဒီ အကြောင်းအရာက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးချလိုသူတွေအတွက် အတော် အရေးကြီးတယ် ပြောရမှာပါ ။ ( Elementary To Pre-Intermediate Level အတွက် ဦးစားပေး သင်ခန်းစာပါ ။ စာ သိပ်မကျေသေးတဲ့ / ထပ် လေ့ကျင့်ချင်တဲ့ Intermediate သင်တန်းသားတွေလည်း လေ့လာစေချင်ပါတယ် ... 😇 ) ၁ နာရီစာ Video သင်ခန်းစာ ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရုံနဲ့ အပိုင်ရသွားမှာ မဟုတ်တော့ လိုအပ်ရင် ၂ ခေါက် ၃ ခေါက် လိုက်ကျင့် လိုက်ပြော ၊ ပြန်ကြည့်ဖို့ အချိန် မနှမြောပါနဲ့လို့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ 😇 လေ့လာ လေ့ကျင့် ထိတွေ့ရင်း အဆင်ပြေ တိုးတက်ကြပါစေ ... အားလုံးပဲ ... အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား အရံအတားကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး အသိပညာနဲ့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ ... 😇 စေတနာဖြင့် #ကိုဇင်ဇေ https://sayazin.net/wvtele-vbc
ဒီ Live မှာ ဆရာ အဓိက ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာ ၂ ခု က ဒါတွေပါ 😇 ၁။ Present Perfect Tense နဲ့ Present Perfect Continuous Tense တွေ အကြောင်း ၂။ ကျွန်တော် နှစ်သက်မိတဲ့ အဆိုအမိန့် တစ်ချို့ တခြား ထည့်ဆွေးနွေးပေးစေချင်တာတွေရှိရင်လည်း ကွန်းမန့်မှာ မေးထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ 😇 စေတနာဖြင့် -ကိုဇင်ဇေ https://youtu.be/Oik0TcQfmlg
Live Discussion ( Tenses & My Favorite Quotes )
Zin Zae Lwin's broadcast
&lt; Zawgyi &gt; ဟာသေလး ဖတ္ၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ တင္ေပးတာပါ ... 😇 Karma ဆိုတာ ျပဳတဲ့ကံ ျပန္ခံရတာကို ဆိုလိုတာ ။ Snoring ဆိုတာ ေဟာက္တာ ။ က်န္တာကေတာ့ သိၿပီးျဖစ္မွာပါ 😌 •••••• &lt; Unicode &gt; ဟာသေလး ဖတ်ပြီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေလ့လာႏိုင်ေအာင် တင်ေပးတာပါ ... 😇 Karma ဆိုတာ ပြဳတဲ့ကံ ပြန်ခံရတာကို ဆိုလိုတာ ။ Snoring ဆိုတာ ေဟာက်တာ ။ ကျႏ်တာကေတာ့ သိပြီးဖြဈမွာပါ 😌
အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား လေ့လာချင်ရင် 👉 ဘယ်က စလေ့လာသင့်လဲ ? 👉 ဘာတွေ စလုပ်သင့်လဲ ? 👉 အခြေခံ အားနည်းရင် ဘယ်က စရမလဲ ? ဆိုတာကို သိချင်နေသူတွေအတွက် ရေရှည် အကျိုးရှိစေမယ့် အကြံပြုချက်တွေကို ဒီ Video မှာ မိနစ် ၄၀ စာလောက် သေချာရှင်းပြပေးထားပါတယ် ။ ( အဲ့လို မိနစ် ၄၀ လောက် အကြံပြုချက်တွေ ရှင်းပြပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ၁၅ မိနစ်လောက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Active English က စီစဉ်ပေးနေတဲ့ သင်တန်းတွေ အကြောင်း ထပ် ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ) ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ သင်တန်းတက်ဖြစ်မှ မဟုတ်ပဲ သင်တန်း မတက်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ တိုးတက်အောင် လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီ အကြံပြုချက်တွေကို လိုက်နာဖြစ်မယ်ဆိုရင် တကယ် ရေရှည်အတွက် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ် 😇 တစ်ချို့တွေ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား လေ့လာနေပေမယ့် ❗️ ခရီး တွင်သင့်သလောက် မတွင်တာတွေ ❗️ ရှိခဲ့ရင်လည်း ကိုယ် ဘာတွေ ပြန် ပြင်ဆင်သင့်လဲ ? ဆိုတာ စဉ်းစားချင့်ချိန်စရာ ရသွားနိုင်ပါတယ် ။ သေချာ အစအဆုံး နားထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အကျိုး ရှိကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ အားလုံးပဲ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား အရံအတားကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး အသိပညာနဲ့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ 😇 စေတနာဖြင့် #ကိုဇင်ဇေ ( Founder &amp; Trainer @ActiveEnglish ) 📌 သင်တန်းတက်ပြီး စနစ်တကျ လေ့လာသွားဖို့ စိတ်ဝင်စားလို့ သင်တန်းတွေ အကြောင်း အသေးစိတ် ထပ်သိချင်တာရှိရင် ☎️ 09-4010-91-800 / ☎️ 09-4010-91-900 တို့ကို ဆက်ပြီး ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် 😇 👉👉👉 sayazin.net/vid1a
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနည်း ၊ ဘယ်က စလေ့လာရမလဲ ? ( English Lessons for Myanmar )
ဒီစာကို ေသခ်ာ ပီပီျပင္ျပင္ ဖတ္လို႕ ရေနရင္ A ကို ေ႐ြးပါ ( ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ) ဒီစာကို သေချာ ပီပီပြင်ပြင် ဖတ်လို့ ရနေရင် B ကို ရွေးပါ ( ယူနီကုဒ်ဖောင့် )
Snuggle ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သိလား ?
&lt; Unicode &gt; အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ 😇 ဒီမှာ စာ လာမတင်ဖြစ်တာ ကြာလို့ လာ နှုတ်ဆက်တာပါ ။ နောက်ရက် ကျရင် သင်ခန်းစာ အတိုလေးတွေ တင်ပေးပါဦးမယ် ။ ကိုယ် နားထောင်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို Vote ပေးခဲ့ပါဗျာ 😇 ===== &lt; Zawgyi &gt; အားလုံးပဲ မဂၤလာပါ 😇 ဒီမွာ စာ လာမတင္ျဖစ္တာ ၾကာလို႔ လာ ႏႈတ္ဆက္တာပါ ။ ေနာက္ရက္ က်ရင္ သင္ခန္းစာ အတိုေလးေတြ တင္ေပးပါဦးမယ္ ။ ကိုယ္ နားေထာင္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို Vote ေပးခဲ့ပါဗ်ာ 😇
Listening / Conversation Quiz
&lt; Unicode &gt; အသံဖိုင်ကို နားထောင်ကြည့်ပြီး မှန်မယ်ထင်တဲ့ စာကြောင်းကို ရွေးကြည့်ပါ #ကိုဇင်ဇေ &lt; Zawgyi &gt; အသံဖိုင္ကို နားေထာင္ၾကည့္ျပီး မွန္မယ္ထင္တဲ့ စာေၾကာင္းကို ေရြးၾကည့္ပါ #ကိုဇင္ေဇ
listening test 1.m4a
Listening Quiz ( 31.1.2021 )
A. The doctor gave himathree check-up.
B. The doctor gave himathrow check-up.
C. The doctor gave himathrough check-up.
D. The doctor gave himathorough check-up.
နိုင်ငံရေး အခြေအနေ မကောင်းလို့ အားလုံးကို သတိထားစေချင်လို့ သတင်းစုမိသလောက်ကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ် 😓😓😓 👉 https://www.facebook.com/100000576790914/posts/4355911267771390/
ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန မေကာင္းလို႔ အားလုံးကို သတိထားေစခ်င္လို႔ သတင္းစုမိသေလာက္ကို ပို႔ေပးလိုက္ပါတယ္ 😓😓😓 👉 https://www.facebook.com/100000576790914/posts/4355911267771390/
အင်တာနက်လိုင်းများ အပိတ်ခံရလျှင် မိမိတို့ ဖုန်းများအား အသုံးပြု၍ Mesh Network များဖြင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး (သို့) တစ်စုနှင့် တစ်စု ဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Mesh Network App များကို ဖော်ပြပေးအပ်ပါတယ်။ &quot;Bridgefy&quot; for Android &amp; Apple iOS &quot;အင်တာနက်များ ရုတ်တရက်ပိတ်ကျသွားလျှင် &quot;Bridgefy&quot; app ကို အသုံးပြုရန်&quot; ဒီ apk က ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပြည်သူ့ဘက်သား တော်လှန်ရေးသမားတွေ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ apk ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အားသာချက်က အင်တာနက် မလိုပဲ bluetooth နဲ့ ဖုန်းချင်းမက်ဆေ့ပို့ ဆက်သွယ်နိုင်တာဖြစ်လို့ အင်မတန် အသုံးဝင်တယ်။ ဟောင်ကောင်လူထုတိုက်ပွဲများ အတွင်းမှာတုန်းက တရုတ်အစိုးရရဲ့ အင်မတန်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကတောင် ဒီ apk နဲ့အသုံးပြုဆက်သွယ်ခြင်းကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီ apk ကိုအသုံးပြုပြီး ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး မီတာ ၁၀၀ (ပေ ၃၃၀ခန့်) အကွာအဝေးအထိ ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ မီတာ ၁၀၀ တိုင်း ကြားမှာ ဖုန်းတစ်လုံးဆီ ရှိပြီး ဆက်သွယ်သွားခြင်းဖြင့် အင်မတန်ဝေးကွာလှမ်းတဲ့နေရာတွေအထိလည်း ကွန်ယက်သဖွယ် အချင်းချင်းချိတ်ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ apk ကို အသုံးပြုကာ နှစ်ဦးချင်း message တွေပို့လို့ရသလို Broadcast ဆိုတဲ့ ဖန်ရှင်နဲ့ ကိုယ်ပို့တဲ့ မက်ဆေ့ကို အနီးအနားရှိသူအားလုံး ဖမ်းယူသိရှိနိုင်အောင် ဖြန့်ဝေလို့လည်း ရတယ်။ Iphone မှာရော Android မှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စစ ဝင်ခြင်းမှာ အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် တစ်ကြိမ်တော့ လိုအပ်တာမို့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲကာ ဝင်ထားကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ Play Store မှာရော၊ App Store မှာရော &quot;Bridgefy&quot; လို့ ရိုက်ရှာကာ လွယ်လင့်တကူ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားနိုင်ကြပါကြောင်း ... ။ (မှတ်ချက် - မိမိတို့ အင်တာနက်များ ရနေခိုက် စတင် အသုံးပြုထားစေချင်ပါတယ်)။
&quot;အေရးေပၚ အႀကံျပဳခ်က္&quot; ( Credit ) ( က်န္တဲ့ App စာရင္းေတြ ဖယ္ထားလိုက္ပါတယ္ ။ လူမ်ားမ်ား က App တစ္ခုကို တူတူသုံးမွ သတင္း ဖလွယ္ရတာ ပို အဆင္ေျပမယ္ ထင္လို့ပါ ။ ဒါေၾကာင့္ Bridgefy သာ သုံးလိုက္ပါ ။ ကၽြန္ေတာ့္ အသိ နည္းပညာ သမား ေတြလည္း ဒီ App ကို အဓိက ညႊန္ေနၾကလို့ပါ ။ ) 👉👉 အင္တာနက္လိုင္းမ်ား အပိတ္ခံရလၽွင္ မိမိတို့ ဖုန္းမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ Mesh Network မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး (သို့) တစ္စုႏွင့္ တစ္စု ဆက္သြယ္ရန္ အသုံးျပဳနိုင္ၾကပါတယ္။ 👉👉👉 &quot;အင္တာနက္မ်ား ႐ုတ္တရက္ပိတ္က်သြားလၽွင္ &quot;Bridgefy&quot; app ကို အသုံးျပဳရန္&quot; ဒီ apk က ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ျပည္သူ႔ဘက္သား ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ apk ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အားသာခ်က္က အင္တာနက္ မလိုပဲ bluetooth နဲ႔ ဖုန္းခ်င္းမက္ေဆ့ပို့ ဆက္သြယ္နိုင္တာျဖစ္လို့ အင္မတန္ အသုံးဝင္တယ္။ ေဟာင္ေကာင္လူထုတိုက္ပြဲမ်ား အတြင္းမွာတုန္းက တ႐ုတ္အစိုးရရဲ့ အင္မတန္ျမင့္မားတဲ့နည္းပညာကေတာင္ ဒီ apk နဲ႔အသုံးျပဳဆက္သြယ္ျခင္းကို မဟန႔္တားနိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီ apk ကိုအသုံးျပဳၿပီး ဖုန္းတစ္လုံးနဲ႔တစ္လုံး မီတာ ၁၀၀ (ေပ ၃၃၀ခန႔္) အကြာအေဝးအထိ ဆက္သြယ္နိုင္တယ္။ မီတာ ၁၀၀ တိုင္း ၾကားမွာ ဖုန္းတစ္လုံးဆီ ရွိၿပီး ဆက္သြယ္သြားျခင္းျဖင့္ အင္မတန္ေဝးကြာလွမ္းတဲ့ေနရာေတြအထိလည္း ကြန္ယက္သဖြယ္အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္သြားနိုင္ပါတယ္။ ဒီ apk ကို အသုံးျပဳကာ ႏွစ္ဦးခ်င္း message ေတြပို့လို့ရသလို Broadcast ဆိုတဲ့ ဖန္ရွင္နဲ႔ ကိုယ္ပို့တဲ့ မက္ေဆ့ကို အနီးအနားရွိသူအားလုံး ဖမ္းယူသိရွိနိုင္ေအာင္ ျဖန႔္ေဝလို့လည္း ရတယ္။ Iphone မွာေရာ Android မွာပါ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။ စစ ဝင္ျခင္းမွာ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္ တစ္ႀကိမ္ေတာ့ လိုအပ္တာမို့ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲကာ ဝင္ထားၾကည့္ၾကဖို့ တိုက္တြန္းပါတယ္။ Play Store မွာေရာ၊ App Store မွာေရာ &quot;Bridgefy&quot; လို့ ရိုက္ရွာကာ လြယ္လင့္တကူ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲထားနိုင္ၾကပါေၾကာင္း ... ။ (မွတ္ခ်က္ - မိမိတို့ အင္တာနက္မ်ား ရေနခိုက္ စတင္ အသုံးျပဳထားေစခ်င္ပါတယ္)။
&quot;အေရးေပၚ အႀကံျပဳခ်က္&quot; ( Credit ) ( က်န္တဲ့ App စာရင္းေတြ ဖယ္ထားလိုက္ပါတယ္ ။ လူမ်ားမ်ား က App တစ္ခုကို တူတူသုံးမွ သတင္း ဖလွယ္ရတာ ပို အဆင္ေျပမယ္ ထင္လို႔ပါ ။ ဒါေၾကာင့္ Bridgefy သာ သုံးလိုက္ပါ ။ ကြၽန္ေတာ့္ အသိ နည္းပညာ သမား ေတြလည္း ဒီ App ကို အဓိက ၫႊန္ေနၾကလို႔ပါ ။ ) 👉👉 အင္တာနက္လိုင္းမ်ား အပိတ္ခံရလွ်င္ မိမိတို႔ ဖုန္းမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ Mesh Network မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး (သို႔) တစ္စုႏွင့္ တစ္စု ဆက္သြယ္ရန္ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါတယ္။ 👉👉👉 &quot;အင္တာနက္မ်ား ႐ုတ္တရက္ပိတ္က်သြားလွ်င္ &quot;Bridgefy&quot; app ကို အသုံးျပဳရန္&quot; ဒီ apk က ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ျပည္သူ႔ဘက္သား ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ apk ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အားသာခ်က္က အင္တာနက္ မလိုပဲ bluetooth နဲ႔ ဖုန္းခ်င္းမက္ေဆ့ပို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္တာျဖစ္လို႔ အင္မတန္ အသုံးဝင္တယ္။ ေဟာင္ေကာင္လူထုတိုက္ပြဲမ်ား အတြင္းမွာတုန္းက တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ အင္မတန္ျမင့္မားတဲ့နည္းပညာကေတာင္ ဒီ apk နဲ႔အသုံးျပဳဆက္သြယ္ျခင္းကို မဟန႔္တားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီ apk ကိုအသုံးျပဳၿပီး ဖုန္းတစ္လုံးနဲ႔တစ္လုံး မီတာ ၁၀၀ (ေပ ၃၃၀ခန႔္) အကြာအေဝးအထိ ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္။ မီတာ ၁၀၀ တိုင္း ၾကားမွာ ဖုန္းတစ္လုံးဆီ ရွိၿပီး ဆက္သြယ္သြားျခင္းျဖင့္ အင္မတန္ေဝးကြာလွမ္းတဲ့ေနရာေတြအထိလည္း ကြန္ယက္သဖြယ္အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ apk ကို အသုံးျပဳကာ ႏွစ္ဦးခ်င္း message ေတြပို႔လို႔ရသလို Broadcast ဆိုတဲ့ ဖန္ရွင္နဲ႔ ကိုယ္ပို႔တဲ့ မက္ေဆ့ကို အနီးအနားရွိသူအားလုံး ဖမ္းယူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ျဖန႔္ေဝလို႔လည္း ရတယ္။ Iphone မွာေရာ Android မွာပါ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ စစ ဝင္ျခင္းမွာ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္ တစ္ႀကိမ္ေတာ့ လိုအပ္တာမို႔ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲကာ ဝင္ထားၾကည့္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ Play Store မွာေရာ၊ App Store မွာေရာ &quot;Bridgefy&quot; လို႔ ႐ိုက္ရွာကာ လြယ္လင့္တကူ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲထားႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း ... ။ (မွတ္ခ်က္ - မိမိတို႔ အင္တာနက္မ်ား ရေနခိုက္ စတင္ အသုံးျပဳထားေစခ်င္ပါတယ္)။
အေရးၾကီးမယ္ ထင္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သတင္းတစ္ခ်ိဳ႕ ဒီကေန တဆင့္ ပို႕ေပးေစခ်င္လား ? Yes or No ေရြးေပးသြားပါ ။ ( Zawgyi )
အရေးကြီးမယ် ထင်ရတဲ့ နိုင်ငံရေး သတင်းတစ်ချို့ ဒီကနေ တဆင့် ပို့ပေးစေချင်လား ? Yes or No ရွေးပေးသွားပါ ။ ( Unicode )
( Zawgyi ) ဒီကာလ အတြက္ပါပဲ ။ ေနာင္ မလိုအပ္ေတာ့ ရင္ မပို႔ပါဘူး ။ •••• ( Unicode ) ဒီကာလ အတွက်ပါပဲ ။ နောင် မလိုအပ်တော့ ရင် မပို့ပါဘူး ။
( Zawgyi ) လာဖမ္းရင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္လဲ ဆိုတာပါ.. လူညီဖို႔ လိုပါတယ္.. ျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ၾကရေအာင္ပါ.. •••••• ( Unicode ) လာဖမ်းရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ဆိုတာပါ.. လူညီဖို့ လိုပါတယ်.. ပြည်သူတွေ အချင်းချင်း ကာကွယ်ကြရအောင်ပါ..
ဒီစာကို ျပန္ျပန္တင္ၿပီး ျဖန္႕ေပးသြားပါ ။ ❗️Twitter / Instagram ပါ ထပ္ပိတ္မယ္ ၾကားပါတယ္ ❗️ ဟုတ္ဟုတ္ - မဟုတ္ဟုတ္ ႀကိဳကာၾကရေအာင္ ။ ( VPN နဲ႕ ေက်ာ္နည္းကေတာ့ လူမ်ားစု သိၿပီးေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္ ။ VPN မသံုးတတ္ေသးရင္ သံုးတတ္ေအာင္ သင္ပါ ) 📌 Youtube မသံုးရေသးရင္ စသံုးပါ ။ Video အသားေပးဆိုေတာ့ ပိုေတာင္ မ်ားမ်ား ေျပာဆို လို႕ ရပါတယ္ ။ Zinzae Active လို႕ ရွာလိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ Channel ကို ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္ ။ 📌 Viber Group အႀကီးေတြ ဖြဲ႕ပါ ။ Viber Community လို႕ ေခၚပါတယ္ ။ ဒီလင့္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ Community ပါ ။ ( 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB2RJwaDQ0L9knom8JwNvjPq%2Foyv2h4NAF3z2w6%2F132zjeyuNlYhl2V0EMbJWCO ) 📌 အရင္က အဂၤလိပ္စာနဲ႕ လူငယ္တိုးတက္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္တာေတြပဲ တင္ထားခဲ့ေပမယ့္ ... ခုေနာက္ပိုင္း ဒီ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တင္ပါ့မယ္ ။ တကယ္လို႕ အဲ့ဒါေတြ စိတ္မဝင္စားဘူးဆိုရင္ ခုရက္ပိုင္း ဝင္မၾကည့္ပဲ ေနေစခ်င္ / ျပန္ထြက္ေစခ်င္ပါတယ္ ။ 📌 ႏိုင္ငံ အေရးအတြက္ သီးသန္႕ Platform အသစ္မလုပ္ပဲ ... ေဆာက္ထားလက္စ Platform ေတြေပၚပဲ ၫႊန္ေပးရတဲ့အတြက္ Marketing လုပ္သလို ျဖစ္သြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ။ ရွိထားၿပီးသား Subscribers / Group Members ေတြကို ပို အားေကာင္းေအာင္ / က်ယ္ျပန္႕ေအာင္ လုပ္သြားခ်င္လို႔ပါ ။ 📌 သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ အလိုက္ လူသိမ်ားသူေတြလည္း ခုလိုမ်ိဳး Platform ေတြ ခြဲထားေစခ်င္ပါတယ္ ။ တစ္ခု ပိတ္ရင္ - တစ္ခု ေႏွးရင္ ေနာက္တစ္ခုကေန သတင္း အခ်က္အလက္ မွ်ေဝႏိုင္ဖို႔ပါ ။ 📌 အင္တာနက္ ပိတ္လိုက္ၿပီး ဖုန္းလိုင္း မပိတ္ေသးရင္ ဆက္သြယ္လို႕ အဆင္ေျပေအာင္ အေရးႀကီး Contacts ေတြကို Messages ပို႕ ဖို႕ ေရြးထားပါ ။ အခ်င္းခ်င္း ဂတိေပးပါ ။ ဥပမာ - ငါ မင္းတို႕ ၅ ေယာက္ဆီ ဖုန္း Message ပို႕ေပးမယ္ ။ မင္းတို႕ ၅ ေယာက္က ေနာက္ထပ္ ၅ ေယာက္ဆီ ဆက္ပို႕ေပးပါ .. စတဲ့ ဆပြား ကြန္ရက္ စနစ္ကို သံုးဖို႕ နီးစပ္ရာ စိတ္တူကိုယ္တူ လူေတြ စုထား - ခ်ိတ္ထားပါ ။ ( ေခါင္းေဆာင္ ရွိေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ ေပ်ာက္ေနပါေစ ။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာ သေဘာေပါက္မွာပါ ) 📌 ဖုန္းလိုင္း + အင္တာနက္ပါ ျဖတ္ေတာက္လိုက္တဲ့ အဆင့္ဆိုရင္ေတာ့ Bridgefy တို႕ Bluetooth Chat တို႕လို Bluetooth အေျခခံ ဆက္သြယ္ ေရး App စနစ္နဲ႕ ဆက္ သတင္း ျဖန္႕ေဝရမွာပါ ။ 📌 လိုရမယ္ရ သတိေပးပါမယ္ ။ လူအမ်ားကို သတင္း ျဖန္႕ေပးမယ့္ Platform ေတြ နဲ႕ ယံုၾကည္ရသူခ်င္း ဆက္သြယ္မယ့္ Platform ... မတူေအာင္ ခြဲသံုးပါ ။ 📌 ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ခုကတည္းက လိုတာကို လိုသလို သံုးတတ္ေအာင္ နည္းပညာနဲ႕ မစိမ္းတဲ့ လူငယ္/လူလတ္ေတြက လိုအပ္သူေတြကို လက္ဆင့္ကမ္း ႀကိဳသင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။
ဒီစာကို ပြန်ပြန်တင်ပြီး ဖြန့်ပေးသွားပါ ။ ❗️Twitter / Instagram ပါ ထပ်ပိတ်မယ် ကြားပါတယ် ❗️ ဟုတ်ဟုတ် - မဟုတ်ဟုတ် ကြိုကာကြရအောင် ။ ( VPN နဲ့ ကျော်နည်းကတော့ လူများစု သိပြီးလောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ။ VPN မသုံးတတ်သေးရင် သုံးတတ်အောင် သင်ပါ ) 📌 Youtube မသုံးရသေးရင် စသုံးပါ ။ Video အသားပေးဆိုတော့ ပိုတောင် များများ ပြောဆို လို့ ရပါတယ် ။ Zinzae Active လို့ ရှာလိုက်ရင် ကျွန်တော့် Channel ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ် ။ 📌 Viber Group အကြီးတွေ ဖွဲ့ပါ ။ Viber Community လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဒီလင့်မှာ ကျွန်တော့် Community ပါ ။ ( 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB2RJwaDQ0L9knom8JwNvjPq%2Foyv2h4NAF3z2w6%2F132zjeyuNlYhl2V0EMbJWCO ) 📌 အရင်က အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ လူငယ်တိုးတက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေပဲ တင်ထားခဲ့ပေမယ့် ... ခုနောက်ပိုင်း ဒီ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပါ့မယ် ။ တကယ်လို့ အဲ့ဒါတွေ စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင် ခုရက်ပိုင်း ဝင်မကြည့်ပဲ နေစေချင် / ပြန်ထွက်စေချင်ပါတယ် ။ 📌 နိုင်ငံ အရေးအတွက် သီးသန့် Platform အသစ်မလုပ်ပဲ ... ဆောက်ထားလက်စ Platform တွေပေါ်ပဲ ညွှန်ပေးရတဲ့အတွက် Marketing လုပ်သလို ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် ။ ရှိထားပြီးသား Subscribers / Group Members တွေကို ပို အားကောင်းအောင် / ကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်သွားချင်လို့ပါ ။ 📌 သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် အလိုက် လူသိများသူတွေလည်း ခုလိုမျိုး Platform တွေ ခွဲထားစေချင်ပါတယ် ။ တစ်ခု ပိတ်ရင် - တစ်ခု နှေးရင် နောက်တစ်ခုကနေ သတင်း အချက်အလက် မျှဝေနိုင်ဖို့ပါ ။ 📌 အင်တာနက် ပိတ်လိုက်ပြီး ဖုန်းလိုင်း မပိတ်သေးရင် ဆက်သွယ်လို့ အဆင်ပြေအောင် အရေးကြီး Contacts တွေကို Messages ပို့ ဖို့ ရွေးထားပါ ။ အချင်းချင်း ဂတိပေးပါ ။ ဥပမာ - ငါ မင်းတို့ ၅ ယောက်ဆီ ဖုန်း Message ပို့ပေးမယ် ။ မင်းတို့ ၅ ယောက်က နောက်ထပ် ၅ ယောက်ဆီ ဆက်ပို့ပေးပါ .. စတဲ့ ဆပွား ကွန်ရက် စနစ်ကို သုံးဖို့ နီးစပ်ရာ စိတ်တူကိုယ်တူ လူတွေ စုထား - ချိတ်ထားပါ ။ ( ခေါင်းဆောင် ရှိသော်လည်း ခေါင်းဆောင် ပျောက်နေပါစေ ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ သဘောပေါက်မှာပါ ) 📌 ဖုန်းလိုင်း + အင်တာနက်ပါ ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ အဆင့်ဆိုရင်တော့ Bridgefy တို့ Bluetooth Chat တို့လို Bluetooth အခြေခံ ဆက်သွယ် ရေး App စနစ်နဲ့ ဆက် သတင်း ဖြန့်ဝေရမှာပါ ။ 📌 လိုရမယ်ရ သတိပေးပါမယ် ။ လူအများကို သတင်း ဖြန့်ပေးမယ့် Platform တွေ နဲ့ ယုံကြည်ရသူချင်း ဆက်သွယ်မယ့် Platform ... မတူအောင် ခွဲသုံးပါ ။ 📌 ဖြစ်နိုင်ရင် ခုကတည်းက လိုတာကို လိုသလို သုံးတတ်အောင် နည်းပညာနဲ့ မစိမ်းတဲ့ လူငယ်/လူလတ်တွေက လိုအပ်သူတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ကြိုသင်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
( ကၽြန္ေတာ့္ ေနရာမွာ ကိုယ္ Follow လုပ္ေစခ်င္သူကို အစားထိုးပါ ။ လိုအပ္သလို Edit လုပ္ပါ )
( ကျွန်တော့် နေရာမှာ ကိုယ် Follow လုပ်စေချင်သူကို အစားထိုးပါ ။ လိုအပ်သလို Edit လုပ်ပါ )
ဒီ စနေ/တနင်္ဂနွေ အင်တာနက် ပြန်ဖြတ်မယ် ဆိုတာလည်း ထပ် အသံထွက်နေပါတယ် ။ ဟုတ် မဟုတ် မသေချာပေမယ့် ဒါလေးတွေ သတိထားပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ် 📌 လိုရမယ်ရ သတင်း မပြတ်အောင် တိုက်ရိုက် ဖုန်းဆက် / Message ပို့မယ့်သူ ဆယ်ယောက်စီတော့ အနည်းဆုံး စုထားပါ ။ ဆယ်ယောက် ကနေ ဆယ်ယောက်ပွားရင် လူ တစ်ရာ စီ သတင်းရောက်မယ် ။ ထပ်ပွားရင် ၁ ထောင် - ၁ သောင်း - ၁ သိန်း စသဖြင့်ပေါ့လေ ။ 📌 ဖုန်းလိုင်းပါ ပိတ်ရင်တော့ Bridgefy လို Bluetooth နဲ့ ချိတ်တဲ့ App တွေ ပြန်သုံးရမှာပါ ။ ဒါလည်း တကယ်က လူညီရင် တစ်လမ်းမှာ တစ်အိမ်ကျော် တစ်ယောက်စီလောက် သေချာ သုံးသွားရင် တစ်လမ်းလုံး သတင်းတွေ သိနေရမှာပါ ။ သုံးနည်း မသိရင် ဒီ Video လေး သေချာ သွားကြည့်ထား ပါ ။ သူ ရှင်းပြထားတာ အတော်လေး ပြည့်စုံပါတယ် ။ 👉 https://fb.watch/3tMyoyAb_S/ 👈
Anycall TV : Bridgefy App Review
ဒီ စေန/တနဂၤေႏြ အင္တာနက္ ျပန္ျဖတ္မယ္ ဆိုတာလည္း ထပ္ အသံထြက္ေနပါတယ္ ။ ဟုတ္ မဟုတ္ မေသခ်ာေပမယ့္ ဒါေလးေတြ သတိထားျပင္ဆင္ထားေစခ်င္ပါတယ္ 📌 လိုရမယ္ရ သတင္း မျပတ္ေအာင္ တိုက္႐ိုက္ ဖုန္းဆက္ / Message ပို႔မယ့္သူ ဆယ္ေယာက္စီေတာ့ အနည္းဆုံး စုထားပါ ။ ဆယ္ေယာက္ ကေန ဆယ္ေယာက္ပြားရင္ လူ တစ္ရာ စီ သတင္းေရာက္မယ္ ။ ထပ္ပြားရင္ ၁ ေထာင္ - ၁ ေသာင္း - ၁ သိန္း စသျဖင့္ေပါ့ေလ ။ 📌 ဖုန္းလိုင္းပါ ပိတ္ရင္ေတာ့ Bridgefy လို Bluetooth နဲ႔ ခ်ိတ္တဲ့ App ေတြ ျပန္သုံးရမွာပါ ။ ဒါလည္း တကယ္က လူညီရင္ တစ္လမ္းမွာ တစ္အိမ္ေက်ာ္ တစ္ေယာက္စီေလာက္ ေသခ်ာ သုံးသြားရင္ တစ္လမ္းလုံး သတင္းေတြ သိေနရမွာပါ ။ သုံးနည္း မသိရင္ ဒီ Video ေလး ေသခ်ာ သြားၾကည့္ထား ပါ ။ သူ ရွင္းျပထားတာ အေတာ္ေလး ျပည့္စုံပါတယ္ ။ 👉 https://fb.watch/3tMyoyAb_S/ 👈
U Min Ko Naing’s Speech > https://fb.watch/3vB0MG9z0k/
U Min Ko Naing's speech
အရပ် ဝတ်တွေ အသွင်ယူ ရောလာမယ် နော် ... ဆိုတဲ့ သတိပေးစကားတွေက ဟိုဘက်က လုပ်နေကျ အကွက်တွေမို့ အရင် ရက်တွေကတည်းက လူကြီးတွေက စိတ်ပူပြီး သတိပေးကြတယ် ... ခုလို အရှိန်မြင့်လာတော့ မနက်ဖြန် ဆို အဲ့လို လူတွေ ပိုပိုများလာနိုင်တယ် ... လူထုထဲ ရောပြီး ကြားမှာ ပြဿနာ လိုက်ရှာတာကမှ ဝိုင်း ထိန်းလို့ ရနိုင်သေးတယ် ။ 📌 ထိပ်ဆုံးနားထိ လာရောနေပြီး ဟိုဘက်ကို လှမ်းရန်စ / သွေးဆူအောင် လုပ်တာမျိုးတွေပါ လုပ်ပြီး ( ဟိုဘက်က ကျွံလို့ကောင်းအောင် လုပ်လာရင် ) ပို အန္တရာယ်များပါတယ် ။ ဒီတော့ တားထားတဲ့နားတွေကို သိပ်မကပ်ပဲ ခပ်ခွာခွာမှာပဲ ( လှမ်းရန်စ ချင်ရင်တောင် ဝေးနေတော့ ရန်စမရတဲ့နေရာမျိုးလောက်မှာပဲ ) ရပ်ကြ-ဟစ်ကြွေးကြရင် ပိုကောင်းမလား ညီတို့ ညီမတို့ စဉ်းစားပါဦး ... ( ခပ်လှမ်းလှမ်းက အော်လည်း ညီတို့ ညီမတို့ အသံတွေကို သူတို့ ကြားကြပါတယ် ) 📌 ပိုရှင်းတာကတော့ ခုချိန်မှာ အများစု အကြံပေးနေတဲ့အတိုင်း ထိပ်တိုက် မတွေ့မယ့် လမ်းကြောင်းတွေသွား / သူတို့လာလည်း ကိုယ်က ရှောင်ထွက်နေလိုက်တာ ပို ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ် ။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လည်း ပြောထားကြပါတယ် ။ နည်းနည်း တွေးကြည့်ပေးပါ ။ အဲ့လူတွေနား သွားအော်နေလို့လည်း အဲ့လူတွေက နားဝင်မှာ မဟုတ် / နားဝင်လည်း အဲ့လူတွေ အဆင့်နဲ့ ဘာမှ လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ ... ဟောင်ကောင် က လူငယ်တွေ ကို ဝတ်စား / တက်ဆုတ် စနစ်မှာ နမူနာ ယူနိုင်ရင်တောင် ... ဟိုကရဲ ကိုင်တွယ်ပုံ နဲ့ ဒီက အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံက မတူတာ ညီတို့ ညီမတို့လည်း သိပြီးသားပါ ။ 📌 ဒီတော့ တတ်နိုင်သလောက် အန္တရာယ် ကင်းမယ့် လမ်းကြောင်း ရှိသေးရင် ရွေးပါကွာ ။ ခွေးရူးရှိတဲ့လမ်းကို ရှောင်ပြီးသွားတာ ခွေးရူးကို ကြောက်လို့ ... လို့ ပြောလည်း ခံရမှာပဲ ။ ခွေးရူးဆိုတာ ဖက်ကိုက်လို့လဲ မရ ... ပြောလည်း နားလည်မှာမှ မဟုတ်တာ ။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ကြပါ ။ ( မြင်သာတဲ့ ခွေးရူးတင် မက မင်းတို့ ဘေးမှာတင် ခွေးရူးတွေ ပါလာနိုင်သေးတာနော် ) 📌 သူတို့ ကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ပြီး CDM ကို ပြန် အထောက်အပံ့ လာဖြစ်စေမယ့် ရုံး တွေ / လုပ်ငန်း တွေ ကို ဦးစားပေး ဆန္ဒပြတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါသေးတယ် ။ 📌 ငါတို့ အသက်တွေ ( အရေအတွက် တစ်ခုထိ ) မဖြစ်မနေ ရင်းပေးလိုက်မှ ပဲ ဒီပွဲ အောင်နိုင်တော့မယ် ... လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့လည်း အကိုတို့ မပြောတတ်တော့ဘူး ။ အဲ့လိုဖြစ်လာအောင် ... မသိမသာ တွန်းပို့ခဲ့မိတဲ့သူတွေထဲတော့ အကိုတို့ မပါချင်လို့ ... ထပ် သတိပေးတာပါ ။ ဒီလိုတွေ ရင်းလိုက်ရင် နိုင်ငံတကာ တပ်တွေ ဝင်လာမယ်ဆိုတာလည်း လက်တွေ့မှာ မလွယ်သေးသလို ... ဝင်လာရင်လည်း ဒီက ခံချနေလို့ ပြည်တွင်းစစ် အသွင် ဆောင်လာရင် မလွယ်ပြန်ဘူး ။ 📌 ဒီတော့ အသက်တွေ ရင်းစရာ မလိုသေးတဲ့ CDM နဲ့ အရင် နိုင်အောင် ဝိုင်း တိုက်ကြည့်ပါရစေဦး ... မင်းတို့ အသားလွတ်တော့ မရင်းချင်ကြပါနဲ့ဦးကွာ ... ရှောင်ရင်း တိမ်းရင်း လိုသလောက်ပဲ လုပ်ကြပါ ။
👉 မုံရွာက လုပ်တဲ့ပုံစံလေး သဘောကျလို့ ပြန့်နေတဲ့ စာတစ်ခုကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် 👉👉👉 မနက်ဖြန် တစ်နိုင်ငံလုံး မုံရွာလို့ ကျင့်ကြပါ Be like Monywa ! ဒီနေ့ မုံရွာဆန္ဒပြသူတွေ လိမ္မာပါးနပ်ခဲ့တာလား။ ပထမဆုံး ချီးကျူးဖို့ကောင်းတာက ပင်မစုရပ်ဖြစ်တဲ့ ညောင်တစ်ပင်ရှေ့မှာ ရဲကားတွေ အချုပ်ကားတွေချထားတော့ ထိပ်တိုက်မတွေ့ပဲ တခြားလမ်းကြောင်းကိုရွေးပြီး သွားကြတယ်။ ရဲကားတွေ အချုပ်ကားတွေ နေရာချထားတဲ့နေရာကို ထိပ်တိုက်မတွေ့ ဘူး။ ထိပ်တိုက်မတိုးဘူး။ တခြားလမ်းကြောင်းက ရှောင်ပြီး ဆန္ဒပြတယ်။ ကြေးရုပ်ရှေ့ မြို့တော် ခန်းမမှာ ရဲတွေ စည်းသုံးစည်းချတော့ ရှေ့ပြေးလမ်းကြောင်းရှာလူတွေက ပင်မစစ်ကြောင်း ရောက်မလာခင်ပဲ ရဲတွေ ချထားတဲ့ ပထမစည်းနဲ့ ပေတစ်ရာအကွာလောက်ထပ်ခွာပြီး ကိုယ်ပိုင်စည်းအဖြစ် ကြိုးတွေတားလိုက်တယ် ။ ရဲတွေရဲ့ ပထမစည်းမကျော်ဖို့ မပြောနဲ့ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ချထားတဲ့ စည်းအတွင်းမှာပဲနေတယ်။ နောက်ပြီး ရဲတွေကိုထိပ်တိုက်မတွေ့ပဲ ရဲတွေ အချုပ်ကားတွေ ချထားတဲ့ ကြေးရုပ်ရှေ့မှာ လုံလောက်တဲ့ အင်အားတစ်စုလောက်ပဲ ချန်ပြီး ဆန္ဒပြကျန်‌နေခဲ့ပြီး ပင်မတပ်ကြောင်းက ကြေးရုပ်ကိုပတ်ကာ ‌ ကျောက္ကာလမ်းပေါ်ပြန်တက်ပြီး တခြားမှာ ဆက်လက် ဆန္ဒပြကြတယ် ။ ဒါပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်က ဆန္ဒပြဖို့ပါ ။ ထိပ်တိုက်တွေ့ အားစမ်းနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး ။ သူတို့ရှေ့တောင်းဆိုနေလည်း သူတို့က ပြည်သူကို အာဏာပြန်ပေးမယ့် ၊ အာဏာပြန်ပေးနိုင်မယ့်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ပတ်စရာ နေရာ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ဆန္ဒပြဖို့ပါ ။ ဘယ်နေရာ ပြပြ ရပါတယ် ။ ကိုယ်တွေ စိုးရိမ်နေခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ မုံရွာဟာ ပါးနပ်လိမ္မာစွာ သွေးမြေမကျ ကိုယ့် အလုပ်ကို လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး !! #crd
အင်တာနက် / မီး ဖြတ်မယ်ဆိုတာ သေချာချာ / မသေချာချာ ... ကိုယ့်ဘက်က တတ်နိုင်တာ မှန်သမျှ ကြိုပြင်ဆင်ထားဖို့က အဓိကပါ ။ ဘယ်နေ့ / ဘယ်အချိန် ဒါတွေ ဖြစ်မယ် ဆိုတာကို သတင်း ထွက်လာတိုင်း တစ်ခါပြီး တစ်ခါ စိတ်ပူနေရရင် ကြာလာလေ စိတ်မောလာလေ / သတင်းတွေကို စိတ်ကုန်လာလေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အဲ့ကျမှ သိုးကျောင်းသား ပုံပြင်လို ဖြစ်မှာလည်း စိုးရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပြင်ဆင်နိုင်တာ အမြဲ ပြင်ဆင်ထားပြီး စိတ် အေးအေး ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်သာ တစ်ခါတည်း လုပ်ထားလိုက်ပါ ။ 📌 အင်တာနက် အတွက် 📌 ၁။ လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ပုံ/Videos တွေကို အင်တာနက်ပေါ် ချက်ချင်း တင်မရလည်း နောင် တင်လို့ ရအောင် မှတ်တမ်း ယူစရာ ရှိတာ ယူနိုင်ဖို့ ပြင်ထားပါ ။ ( တစ်ခုခုဆို မှတမ်းယူထားဖို့ ဖုန်းထဲမှာ လုံလောက်တဲ့ Storage Space ကျန်အောင် သတိထားပါ ) ၂။ အင်တာနက် ပြန်ရတာနဲ့ DVB , VOA , BBC လို သတင်း ဌာနတွေကို ပြည်ပက တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေထဲက Followers များသူတွေကို အဲ့ မှတ်တမ်းတွေ ချက်ချင်း ပို့ပေးလိုက်ပါ ။ ကိုယ့် ဘာသာ လိုက်ဖြန့်နေရတာထက် ပို မြန်ပါလိမ့်မယ် ။ ၃။ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်လိုက်ပေမယ့် ဖုန်းလိုင်းတွေ ရသေးတယ်ဆိုရင် ဖုန်း / SMS တွေနဲ့ အချင်းချင်း သတင်း ဖြန့်ဝေနိုင်အောင် ... ယုံကြည်ရသူချင်း &lt; အနည်းဆုံး ၁၀ ယောက်လောက် &gt; ကြိုတင် ဖလှယ် / ချိတ်ဆက်ထားပါ ။ ( အရင်က ပြောဖူးတဲ့ Bluetooth စနစ်သုံး &lt; မီတာ ၁ ရာစီပဲ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ &gt; Bridgefy တို့ ဘာတို့ကလည်း ဒီ နိုင်ငံ အခြေအနေနဲ့ လက်တွေ့မှာ လူညီညီ လူများများ တကယ် လုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါ ။ ) ဒီတော့ နေ့ဘက်ဆိုရင်တော့ သွားလာ / လူကိုယ်တိုင် သတင်း ဖလှယ်ကြရမှာပါပဲ ။ ( ညပဲ ခဏ ဖြတ်တာဆို သိပ်မပူရပါဘူး ) အဲ့ထဲကမှ ပြည်ပက ရအောင် သတင်းပို့နိုင်သူတွေ ရှိရင်လည်း ရှိလာပါလိမ့်မယ် ။ ပြည်တွင်း အင်တာနက် ဖြတ်လည်း ပြည်ပ SimCard နဲ့ သုံးလို့ ရနေတယ် ဆိုသူတွေရှိနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် ... ကိုယ့် အနေနဲ့က ကိုယ် လုပ်နိုင်တာကိုပဲ သေချာ လုပ်ဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားဖို့ပါ ။ 📌 လျှပ်စစ် မီး အတွက် 📌 ၁။ ဓာတ်မီး / ဖုန်းမီး / လျှပ်စစ်မီးအိမ် / ဖယောင်းတိုင်မီး စသဖြင့် ဆောင်နိုင်သလောက် ဆောင်ထားပါ ။ ၂။ Power Bank / Solar Charger တွေ လည်း ဆောင်နိုင်ရင် ဆောင်ထား / အားသွင်းထားပါ ။ ၃။ အင်ဗာတာ / မီးစက် ရှိရင် တော့ ပိုကောင်းပါတယ် &lt; ပေါ့ဆမီး သတိပြုပါ &gt; ၄။ သောက်ရေ/သုံးရေလည်း မပြတ်အောင် ဂရုစိုက်ထားပါ ။ &lt; မီးပျက်လို့ ရေပါ ပြတ်မသွားအောင်ပါ ။ တိုက်ခန်းတွေ ပို သတိထားရမှာပေါ့ဗျာ &gt; ••••••• တခြား ဖြည့်ချင်တာ ရှိရင် ကွန်းမန့်မှာ ဖြည့်သွားကြပါဗျာ ။ ကျွန်တော်လည်း လိုသလို ဒီ Post မှာ ထပ်ဖြည့်ပေးသွားပါမယ် ။ အမြဲ စိတ်ခြောက်ခြားနေတာနဲ့ အမြဲ သတိရှိနေတာ မတူပါဘူး ။ ကျွန်တော်က အမြဲ သတိရှိစေချင်တာပါ ။ #WhatIsHappeningInMyanmar
Facebook ကို သုံးရ အဆင်မပြေဖြစ်နေရင် BBC သတင်းဌာနရဲ့ ဒီလင့် ကို ဝင်ဝင် ကြည့်ပါ ။ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေ သူတို့ အဲ့ဒီမှာ တင်ပေးနေပါတယ် ။ 👉 https://www.bbc.com/burmese/live/burma-56046651
၂၀၂၀ မြန်မာအာဏာသိမ်း- မြစ်ကြီးနားမှာ စစ်ကားတွေရောက်လာပြီး ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်း - ဘီဘီစီ မြန်မာ | အထူးသတင်း | နောက်ဆုံးရ သတင်း | နောက်ဆုံးရခေါင်းစဉ် သတင်း |မြန်မာသတင်း
CDM ထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့တွေကို ထပ်စုစည်း ပေးလိုက်ပါတယ် ။ FB မှာ ရှဲတာ / ပြန်ကူးတင်တာတင်မက လိုရမယ်ရ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Note ထဲမှာပါ ကူးသိမ်းထားလိုက်ပါ ။ ဒါမှ လိုအပ်သူကို အမြန် ညွှန်ပေးနိုင်မှာပါ ။ အဖွဲ့ကြီးတွေတင်မက သက်ဆိုင်ရာ Post အသီးသီးက နေ မြို့/မြို့နယ် အလိုက် အဖွဲ့တွေပါ ရသလောက် စုပေးထားပါတယ် ။ ရှေ့က စု-စုပေးခဲ့သူတွေကို လေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ( ဒီစာရင်းထဲမှာ မပါသေးတာတွေကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာ ထပ်တိုး ဖြည့်ဖြည့်သွားကြပါ ) 📌 ဒီလို အဖွဲ့ကြီးတွေကို ဆက်သွယ်ရ အဆင်မပြေ / ကြန့်ကြာနေရင် 👉 ကိုယ့်ရဲ့ မိဘဆွေမျိုးတွေ ကိုယ်နဲ့ သိဖူး/ ရင်းနှီးဖူးတဲ့ ကျောင်း/တက္ကသိုလ်/လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တူက မိတ်ဆွေတွေ ကိုယ်နေထိုင်ရာ လမ်း/ရပ်ကွက်/မြို့နယ်တွေက မိတ်ဆွေတွေ / ပရဟိတ အဖွဲ့တွေကို ဆက်သွယ် တောင်းဆိုတဲ့ နည်းကို သုံးစေချင်ပါတယ် ။ ❗️❗️❗️ အဲ့လို နီးစပ်ရာက တဆင့် ဆက်သွယ်တာကကျတော့ ယုံကြည်မှု/အာမခံနိင်စွမ်းမြင့်လို့ ပို မြန်မြန် အဆင်ပြေလေ့ရှိပါတယ် ။ ••••• ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ CRPH ရဲ့ CDM Supporting Team 👉 https://www.facebook.com/crph.cdm.support/ ) ••••• ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအတွက် CDM support android application ( App ထဲမှာ ပိုပြီး စုံစုံလင်လင် ဖြည့်နိုင်/ရှာနိုင်ပါတယ် ) 👉 https://www.facebook.com/349680502788264/posts/366008977822083/ ••••• We Support Heroes 👉 https://www.facebook.com/WeSupportHeroes/ ၂/၂၀၂၁ ခိုင်မြဲသော လက်များ 👉 https://www.facebook.com/2021Feb/ 21 Savage MM 👉 https://www.facebook.com/21savagemm/ လို Pages တွေကို ဆက်သွယ် တောင်းခံနိုင်သလို ( ပြည်ပ + ပြည်တွင်း ချိတ်ဆက် လုပ်ပေးထားတဲ့ ) CDM Supporting for Myanmar 👉 https://www.facebook.com/101080798694831/ CDM supporting for Myanmar 👉 https://www.facebook.com/101080798694831/ Finding4#CDM 👉 https://www.facebook.com/Funding4CDM/ Support to CDM Myanmar 👉 https://www.facebook.com/Support-to-CDM-Myanmar-539837820263048/ ••••••• 📌 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ------------------------ ၁. တန့်ဆည် https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=107236971404879&id=106376264824283 ၂. မုံရွာ TU https://www.facebook.com/TUMonywa-CDM-Support-Team-352853612484205 ၃. မုံရွာ သပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီ https://www.facebook.com/104390401691782/photos/a.104882644975891/105852081545614/?type=3 ၄. ကျွန်းလှ https://www.facebook.com/415591041957963/posts/1553335358183520/?d=n ၄. ခန်တီး https://www.facebook.com/groups/230541695387198/?ref=share ၅. အရာတော် https://www.facebook.com/ayadawcdmsupporters/ ၆. ကလေး https://www.facebook.com/CDM-Support_KalayMyo-100128248789631 ၇. ရွှေဘို https://www.facebook.com/CDM-For-Shwebo-102060818590401/ ၈. ဟုမ္မလင်း https://www.facebook.com/CDM-Supporters-for-Homalin-108311947962180/ ၉။ မင်းကင်းမြို့နယ် CDM ကူညီမှု အဖွဲ့ 👉 https://www.facebook.com/%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B7%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9cdm%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AF%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%82%95-105125174948047/ 📌 နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ----------------------------------- ၁. နေပြည်တော် https://www.facebook.com/CDM-Support-Team-Naypyitaw-175877190719897/ 📌 ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး --------------------- ၁. တောင်ငူ https://www.facebook.com/ToungooCDM2021 ၂. အုတ်ဖို https://www.facebook.com/groups/907545196688097 ၃. နတ်တလင်း https://www.facebook.com/367399437564986/posts/367469210891342/?sfnsn=mo ၄. ကျောက်တံခါး https://www.facebook.com/CDM-Supporting-KTG-180033856940028/ ၅. ကနီ https://www.facebook.com/kanicdmsupportingteam/ ၆. ပဲခူးတိုင်း https://www.facebook.com/CDM-Bago-105040744958080/ ၇. ဖြူး https://www.facebook.com/We-Support-CDM-PHYU-342141387021965/ 📌 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး -------------------------- ၁. ကျောက်ဆည် TU https://www.facebook.com/groups/411699883240404/?ref=share ၂. စဥျ့ကူး https://www.facebook.com/CDMSupportTeamSGU ၃. မန္တလေး https://www.facebook.com/106512301475618/posts/109481244512057/ ၄. မြင်းခြံ https://m.facebook.com/AungMyoLattMGN/ ၅. ဝမ်းတွင်း https://www.facebook.com/cdmwundwin/ ၆. ကျောက်ဆည် https://www.facebook.com/1673325302794953/posts/3442404695886996/?d=n ၇. မိုးကုတ် https://www.facebook.com/Nationalnetworkmogok/ ၈.မေမြို့ https://www.facebook.com/maymyoyouth2021/ 📌 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး -------------------------- ၁. တောင်ဒဂုံ https://www.facebook.com/CDM-Support-Team-South-Dagon-338513424145239 ၂. မှော်ဘီ https://www.facebook.com/CDM-Support-Team-Hmawbi-347033273093769 ၃. လှိုင် https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3822666441149246&id=100002177826051&sfnsn=mo ၄. လှိုင်သာယာ https://www.facebook.com/CDM-Supporting-Group-HTY-105514854907481/ ၅. ဆိပ်ကြီးခနောင်တို 09-420230319, 09-961590279, 09798161085 ၆. အင်းစိန် https://m.facebook.com/Civil-Disobedience-Movement-ထောက်ခံလှုပ်ရှားမှု-ကွန်ယက်-Insein-101546175306494/ ၇. မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် https://www.facebook.com/groups/1395429590794135/ 📌 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ------------------------ ၁. မကွေး https://www.facebook.com/CDMSupportMagway/ ၂. ချောက် https://www.facebook.com/103292241800257/posts/104326268363521/?d=n ၃. စလင်း https://www.facebook.com/Support-Team-for-Civil-Disobedience-Movement-Salin-175354304177577/ 📌 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး --------------------------- ၁. ကျိုက်လတ် https://www.facebook.com/182176686747531/posts/187496756215524/?sfnsn=mo ၂. ငါးသိုင်းချောင်း https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341178540562537&id=337363087610749 ၃. ပုသိမ် https://www.facebook.com/PatheinCDM/ ၄. မအူပင် https://www.facebook.com/Maubin-CDM-Support-Team-100159722118186 ၅. မော်ကျွန်း https://www.facebook.com/CDM-Support-Team-Mawgyun-100199675446629/ ၆. ဟင်္သာတ https://www.facebook.com/cdmsupporter/ ၇. ငပုတော https://www.facebook.com/CDMSupportNgaputaw/ ၈. ရေကြည် https://www.facebook.com/Civil-Disobedience-Movement-Helper-Group-Yekyi-102640298533547/ ၉. ဒေးဒရဲ https://www.facebook.com/Dedaye-CDM-supporting-team-344453623567557/ ၁၀. ဇလွန် https://www.facebook.com/Zalun-CDM-Supporting-Group-102035238596354/ 📌 ကချင်ပြည်နယ် ----------------------- ၁. မိုးညှင်း https://www.facebook.com/We-Love-Mohnyin-Volunteers-Team-105878881322234/ ၂. အင်းတော်ကြီး https://m.facebook.com/nantmun.indawgyilake/ 📌 မွန်ပြည်နယ် ------------------ ၁. မော်လမြိုင် https://www.facebook.com/CDM-Supporting-Team-MON-Mawlamyine-357781071977210/ ၂. မွန်ပြည်နယ် https://www.facebook.com/CDM-Support-Team-Mon-State-184023706503962/ ၃. သိမ်ဇရပ် https://www.facebook.com/178726280301058/posts/181090860064600/ ၄. မုဒုံ https://www.facebook.com/Mudon-CDM-Supporting-Team-106955268098924/ ၅. သထုံ https://www.facebook.com/thatoncdm/ ၆. မွန်ပြည်နယ်(ရုန်းထွက်စို့-မွန်) https://www.facebook.com/yonehtwesomon/ 📌 ချင်းပြည်နယ် -------------------- ၁. ဟားခါး https://www.facebook.com/groups/228356051997306/?ref=share ၂. ချင်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ https://www.facebook.com/CDM-Support-Chin-State-183632703192091/ ၃. ထန်တလန် https://www.facebook.com/CDM-Supporting-Committee-for-Thantlang-102279875236446/ ၄. ကန်ပက်လက် https://www.facebook.com/CDM-Support-Kanpetlet-106306891496713/ 📌 ရှမ်းပြည်နယ် -------------------- ၁. ကေလာ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1953105252
CRPH - CDM Supporting Team
📌 ရှမ်းပြည်နယ် -------------------- ၁. ကေလာ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=195310525270087&id=189434562524350 ၂. ညောင်ရွှေ https://www.facebook.com/CDM-Support-Team-Nyaung-Shwe-102467818550588/ ၃. တောင်ကြီး https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=107143401415138&id=107122401417238 ၄. ရှမ်းမြောက် https://www.facebook.com/Multi-University-Supporting-Team-For-CDM-Northern-Shan-State-101368898661888/ ၄. နမ့်စန် https://www.facebook.com/cdmsuppoters.ns/ 📌 ကရင်ပြည်နယ် ---------------------- ၁. လိပ်သို https://m.facebook.com/CDM-Supporting-Team-Leiktho-100943448707102/ ၂. ဘားအံ https://www.facebook.com/CDM-Support-Team-Hpa-An-184713443104380/ 📌 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၁. https://www.facebook.com/We-Support-CDM-Palaw-Team-102433461890403/
Kalaw CDM Support Team
ဒီနေ့က လကုန်ရက်လည်း ဖြစ်တော့ CDM အတွက် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး မထောက်ပံ့ရသေးရင် ထောက်ပံ့ပေးကြပါ ။ ( CDM + Peaceful Protest + CRPH ၃ ခုလုံး နိုင်သလောက် ဖိနင်းနေရမှာပါ ) ဒီပုံထဲက အဖွဲ့တွေကို ဆက်သွယ်လှုပါ ။ လှုတဲ့ နေရာမထပ်အောင် / ထိရောက်အောင် သူတို့ အချင်းချင်း ဒေတာ ပြန်ရှဲနေတဲ့ အဖွဲ့တွေမို့ပါ ။ ( ကိုယ်တိုင် / ကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့ကိုယ် လှုထားတာတွေ ရှိရင်လည်း ကိုယ်လှုခဲ့တဲ့ ဌာန အလိုက် သူတို့ကို ဒေတာ ပြန်ရှဲပေးထားသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း CRPH ရဲ့ CDM Supporting Page ကို ဒေတာ ပို့ပေးထားသင့်ပါတယ် ။ ) 👉 https://www.facebook.com/crph.cdm.support/ သိန်း-သောင်းမှ မဟုတ် ထောင်ဂဏာန်း လည်း လှုနိုင်သလောက် လှုပါ ။ Fund လိုနေကြမှာပါ ။ ဖုန်းခေါ်လို့ မရနိုင်ပါ ။ Viber ( ဒါမှမဟုတ် ) Page Messenger ကနေ ဆက်သွယ်ပါ ။ တစ်ခါ - နှစ်ခါ ပို့ပြီး စာမပြန်လို့ ဆိုပြီး စိတ်မလျှော့ပါနဲ့ ။ သူတို့လည်း ပတ်ချာလည် ရိုက်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေလို့ပါ ။ နာရီခြား - ရက်ခြားပြီး ထပ်ထပ်ပို့ကြည့်ပါဗျာ ။ #Civil_Disobedience #RejectMilitaryCoup #SupportCDM